what is this name...???? "virus"......... — MYSTERY ZILLION
what is this name...???? "virus".........
April 2012 edited April 2012 in Antivirus & Virus
this antivirus name..??????this name show on notepad when my computer start.notepad name is "desktop.ini"...this virus..??????????i think..,this is virus.if have how to kill this virus.pls everybody... ^:)^ ^:)^
အဲဒိမှာ Program download ဆွဲပြီး ရှင်းတာရယ်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှင်းတဲ့ Method ၂ နည်းရယ်ရှိတယ်ဗျာ။
bro..can't install microsoftFix50641.msi...pls ...can u explain me stat by stat in myanmar....plsss ^:)^ ^:)^ ^:)^
Sorry ပါဗျို့။ အပေါ်ကဟာက Windows XP အတွက်ပါ။ Windows7အတွက်ဆိုရင် -
(၁) Folder တစ်ခုခုကိုဖွင့်လိုက်ဗျာ။
(၂) ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်မှာ <b>Organize</b> ဆိုတာရှိတယ်။
(၃) အဲဒါကိုဖွင့်လိုက်ရင် <b>Folder and search options</b> ဆိုတာရှိတယ်။
(၄) သူ့ထဲကို၀င်ပြီးအပေါ်က bar မှာရှိတဲ့ <b>View</b> ထဲကို၀င်ပြီးရင်
(၅) <font color="blue"> Show hidden files, folders and drives </font>ဆိုတာကိုတစ်ချက် click လိုက်။ ပြီးတော့သူ့အောက်က
Hide extensions for known file types </font>နဲ့ <font color="blue">Hide protected operating system files (Recommended)</font> ဆိုတာကိုအမှန်ခြစ်ဖြုတ်လိုက်။
(၆) ပြီးရင် Taskbar က Start အလုံးလေးကိုဖွင့်လိုက်ဗျာ။ အောက်မှာ Search box အသေးလေးရှိတယ်။
(၇) အဲဒိမှာဒီဟာ <font color="red">shell:common startup</font> ကို Paste လုပ်လိုက်ဗျာ။ Folder တစ်ခုပေါ်လာရင်၀င်ပြီးအထဲက desktop.ini ဖိုင်ကိုဖျက်လိုက်ဗျာ။
(၈) Search box ထဲမှာ <font color="red">shell:startup</font> ကို Paste ထပ်လုပ်၊ ခုနလိုပဲFolder ထဲ၀င်ပြီးdesktop.iniဖျက်။ အဲဒါဆိုရင်ပြီးပြီ။
(၉) ပြီးရင်အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ခဲ့တာတွေသူ့နဂိုအတိုင်းပြန်ထားလိုက်ပေါ့။ Show hidden files...ကိုလည်း Don't Show လုပ်လိုက်ပေါ့။
သူက virus တော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ Bug (Program Error) တစ်ခုပဲ။
thank u very much for the help, i was looking for thisalong time ago and finally i fixed it thank u again